वर्षेनी घट्दै जापानको जनसङ्ख्या , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
वर्षेनी घट्दै जापानको जनसङ्ख्या
टोकियो । जापानको जनसङ्ख्या वर्षेनी घट्दै गएको तथ्याङकले देखाएको छ ।
जापानको आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार यस वर्षको जनवरी १ तारिख सम्ममा जापानको कुल जनसङ्ख्या १२ करोड ४७ लाख बढी रहेको पाइएको छ ।
वल्र्डओमिटरडटकम नामको वेवसाइटमा प्रकाशित जापानको प्रत्यक्ष जनसङ्ख्या थपघट तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जुलाई १० तारिख २०१९ बेलुका सम्ममा १२ करोड ६८ लाख बढी रहेको देखिन्छ ।
जापानको आन्तरिक मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको जनवरी १ तारिख २०१९ को तथ्याङ्क अनुसार जापानको जनसङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ लाख ३३ हजारले घटेको छ ।
जापानको जनसङ्ख्या यतिधेरै घटेको अहिलेसम्मकै बढी हो ।
सन् १९६८ सालदेखि राख्न थालिएको जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क हेर्दा गत वर्ष सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या घटेको पाइएको छ । १० वर्षदेखि घट्दो क्रममा रहेको जापानको जनसङ्ख्या पाचौँ वर्ष लगातार ठूलो सङ्ख्यामा ओरालो लागेको हो ।
त्यस्तै जापानमा शिशु जन्मदरको संख्या सन् १९७९ पछि गत बर्ष सबैभन्दा कम भएको छ । गत वर्ष मात्र ९ लाख २१ हजार शिशुको जन्म भएको जापानको सरकारी रेकर्डले देखाएको छ ।
शिशु जन्मदरको यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक लाख भन्दा बढीले कम हो ।
जापानी नागरिकको संख्या वर्षेनी घटेपनि जापानमा बस्ने विदेशी नागरिकहरूको संख्या भने बढेर दुई प्रतिशत नाघेको छ। विदेशी नागरिकहरूको संख्या बढेर गत वर्ष २ लाख ६६ हजार नाघेको छ । यो संख्या जापानको कुल जनसङ्ख्याको २ प्रतिशत भन्दा बढी हो ।